Abuukaate lagu dilay magaalada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Abuukaate lagu dilay magaalada Muqdisho
Abuukaate ka tirsanaa wasaaradda Caddaaladda xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho xilli lagu dhawaa Afurka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa ka hadashay Abuukaate ka tirsanaa Wasaaraddaas oo maqribnimadii caawa lagu dilay xaafadda Taleex ee degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Kooxo ku hubeysnaa Bastoolad ayaa la tilmaamay inay dileen Abuukaataha oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Cabdi Maxamed, isagoo u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray rasaastii haleeshay marxuumka.
Weerarka oo dhacay xilli lagu dhaw yahay afurka ayaa la xaqiijiyay in la toogtay Abuukaataha isagoo sooman, raggii ka dambeeyay falkaas ayaa goobta si deg deg ah uga baxsaday, waxaana halkaas tegay ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Soomaaliya.
Ma jirto cid lagu soo eedeeyay falka, mana jiraan sidoo kale dad loo soo qab-qabtay falka, iyadoo dadkii ka dhawaa goobta ay sheegeen in kooxdii biskooladaha ku hubeysnaa ee dilay Abuukaataha ay goobta ka baxsadeen.
Dilaka sidan oo kale ah ee qorsheysan ayaa waxaa lagu yaqaan kooxda Al-Shabaab oo intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan weerarradeedu ay yaraadeen.